ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကိုကိုယ်တိုင်မွမ်းမံနည်း | eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, စာဖတ်သူများ, Software များ, Kindle လဲ tutorial များ
ဤသည်လက်စွဲ Kindle device ကို updates များကိုလမ်းညွှန်တိုတောင်းသည်။ Todo eReaders ရောငါရောသင့်စက်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာမှမလုပ်မီလမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြီးပြန်လည်ဖတ်ပါ။ ယခုအပတ်အစောပိုင်းက Amazon သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက် update များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် GoodRreads ကို eReader နှင့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ မည်သည့် Kindle device အတွက်မဆိုဤလမ်းညွှန်သည်မှန်ကန်သည်။ eReaders နှင့် tablet နှစ်ခုလုံးတွင် manual installation လုပ်ခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်နှင့်ဆက်မလုပ်မီကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Kindle Fire ၌လက်စွဲစာအုပ်ကို update လုပ်ပြီးကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ငါအထူးကြိုးစားခဲ့ပြီ ဗားရှင်း 11.3.1 ကို install လုပ်ပါ သော Goodreads ၏ထည့်သွင်းပါဝင်သည်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, installation ကိုငါ့စက်ကိရိယာနှင့်အတူမည်သည့်အဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်မထားပါဘူး ပြန်လည်စတင် သူ့ကိုပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့လုံလောက်ပေမဲ့ငါ့ရဲ့တာဝန်ကအဲဒါကိုသင်သိစေဖို့ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
100% ဘက်ထရီအားသွင်းရန် Kindle စက်ပစ္စည်း။
Kindle ကို pc ဆက်သွယ်ရန် usb cable ။
Kindle ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အတွက် PC အတွက်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားသော drivers သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 100% ဘက်ထရီနှင့်အတူ KindleKindle ဆိုတာဘာလဲအရေးမကြီးပါဘူး။ အကယ်၍ စွမ်းအင်ချို့ယွင်းမှုရှိပါက Kindle သည်အုတ်နှင့်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဘက်ထရီကို ၁၀၀% ထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ pc သည် Kindle နှင့်ဆက်သွယ်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Kindle ကိုဆက်သွယ်သောအခါ pc သည်နောက်ထပ်သိုလှောင်မှုယူနစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖတ်ပြီး Windows ၏ hard drive အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်၊ Amazon ကားမောင်းသမားတွေတပ်ဆင်ထားဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ သင့်မှာအဲဒီလိုမရှိရင်သင်လုပ်နိုင်တယ် ဒီ link မှသူတို့ကို download လုပ်ပါ.
အထက်ပါလိုအပ်ချက်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရရှိပါမည် ဒီဝဘ် နောက်ဆုံးဆော့ (ဖ်) ဝဲဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် Kindle Paperwhite သည် ၅.၄.၂ ဖြစ်ပြီး Kindle Fire သည် ၁၁.၃.၁။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤဗားရှင်းများရှိပါက၎င်းတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သောနိမ့်ကျသောဗားရှင်းများရှိပါက Kindle ကိုဆက်လက် update လုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ Kindle တွင်မည်သည့် version ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသောမူကွဲကိုသိရှိရန် Kindle ကို menu သို့သွားပါ။စက်ကို» Kindle settings menu မှရွေးစရာကိုရှာပါ။အကွောငျးKindle Fire ၏အမှု၌၎င်းကိုရွေးစရာရှိသည်။ပိုပြီးထိပ် bar ထဲကနေ။ ဗားရှင်းဘေးတွင်“ ကပြောသောခလုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။Kindle ကို Update လုပ်ပါ»ဘယ်ဟာကိုပိတ်ထားသလဲ၊ ဆိုလိုတာကငါတို့နှိပ်လိုက်တာကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ ဤခလုတ်သည်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဖွင့်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ update ကိုလိုအပ်ပါတယ်အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ငါတို့သွားပါ ဒီဝဘ် ပြီးတော့အသစ်ပြောင်းခြင်းအထုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသောအရာကို download လုပ်သည်။ ယခုငါတို့ update update ကိုရပြီ, ငါတို့ကဖိုင်တွဲသို့ကူးယူနှင့် paste «ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှုKindle ကေတာ့ cable နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ Kindle ကို PC ကနေလုပ်တာပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအထုပ်ကိုကူးယူပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကေဘယ်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး Kindle ကိုသာကိုင်တွယ်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည့်ဗားရှင်းကိုအသိပေးသည့်မျက်နှာပြင်သို့သွားပြီး၊Kindle ကို Update လုပ်ပါ»ယခုကျွန်ုပ်တို့အားနှိပ်ပြီးတပ်ဆင်မှုစတင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခု activate နှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Kindle စက်သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ အမှားတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အဖြစ်ပျက်အတိုင်းဖြေရှင်းနည်းကိုစက်ကိုယ်နှိုက်ကပြောပြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ Kindle ကိုပိတ်ပြီးပြန်သွားပါ။ အားလုံးကိုပိတ်ထားခလုတ်မှဖွင့်ရန်။ သင့်တွင်အမှားအယွင်းမရှိပါ၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင့်တွင်အသစ်ပြောင်းရန်အသစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဒီလက်စွဲကို update ကိုတရားဝင် Amazon package များဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle rooted ရှိလျှင်၊ အထူးသဖြင့် Kindle Fire တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်စွဲမွမ်းမံမှုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည်ထို root ကိုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မွမ်းမံမှုမပြုလုပ်ခင်စဉ်းစားပါကသင်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေစဉ်းစားပါ။ စကားမစပ်၊ အကယ်၍ သင်၌သင်ခန်းစာနှင့် ပတ်သတ်၍ မေးခွန်းများရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်ပါကအသစ်ပြောင်းခြင်းသာဖြစ်ပါက၊ ဆောင်းပါးတွင်မှတ်ချက်ပေးပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Goodreads သည် Kindle မိသားစုဝင်များဖြစ်သည်, Xda-Developers များ,
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » Kindle ကိုကိုယ်တိုင်မွမ်းမံခြင်း
ပထမမျိုးဆက်၏မီးတောက်လောင်နေသောစက္ကူဖြူသည်ကောင်းသောစာဖတ်ခြင်းများမပါ ၀ င်ပါ။ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကျွန်ုပ်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ပထမမျိုးဆက် KP အတွက်နောက်ဆုံး version သည် 1 5.3.9 ဖြစ်သည်
သတ္တုတွင်းသည်အသစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Goodreads ပုံသင်္ကေတပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အမေရိကန်ဗားရှင်းအတွက်ဖြစ်မလား။
ကျွန်ုပ်တွင်အမေရိကန်မူရင်းရှိသည်။ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ကို ၅.၃.၉ ဖြစ်သည်
ငါမွမ်းမံရန်မကြိုးစားရသေးသော်လည်း Goodreads သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သာအလုပ်လုပ်သည်ကိုငါဖတ်ပြီးပြီ။
Joaquín Garcia က ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ဆောင်းပါးပါလင့်ခ်သည်အမေရိကန်ဗားရှင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အရေးမကြီးပါ၊ စနစ်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ ဖိုင်ထည့်ပြီးဖိုင်ကို၎င်းကိုဖွင့်ရန်ပြောထားသည်။ အရေးမကြီးသောအချက်များမှာမူဗားရှင်းများ၏ပြtheနာဖြစ်သည်၊ သင်၏ကိရိယာသည်အနည်းဆုံး Amazon ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်သောဗားရှင်းထက်နိမ့်သည်ကိုသင်သတိပြုရမည်။ လတ်တလောတွင် Kindle Fire သစ်၊ ၂၀၁၃ Kindle Paperwhite နှင့်ဒုတိယမျိုးဆက် Kindle Fire တို့အတွက် updates များကိုငါကြေငြာခဲ့သည်။ ငါကြိုးစားခဲ့ပြီး update သည်အမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဒီ update ကထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကအဲဒီစက်ကိုရှိပြီးသားဒါမှမဟုတ်လာမယ့်စက်ပစ္စည်းမတိုင်ခင်အထိ Amazon ကိုသာသိတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ပိုပြီးတိတိကျကျမပြောနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစာဖတ်ခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
American version မှာတော့ goodreads အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်သင့်လဲ။
ဒုတိယမျိုးဆက် Kindel ကိုကျွန်တော်မကြာသေးမီက ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလင်းမီးသီး၏အိုင်ကွန်ပျောက်သွားပြီး၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ကို backlight ရန်နှင့်အလင်းပြင်းအားကိုချိန်ညှိရန်အသုံးပြုသည်။ ငါ icon ကိုပြန်လည်ရယူခြင်း, update ကို, reboot, reset မပါဘဲငါတတ်နိုင်သမျှအားလုံးပြုမိပါပြီ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌အထိခြောက်ကြိမ်။ ဒီအသုံးအဆောင်မရှိရင်စာဖတ်သူကိုမသုံးနိုင်ဘူး၊ မျက်လုံးပြတ်ပြီးညမှာအသုံးမကျဘူး။ ငါ့ကိုငါကူညီမယ့်သူ၊ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား ???? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ paperwhite အသစ် (၂၀၁၅) တွင်ကောင်းမွန်သောဖတ်ခြင်းများပါရှိပါသည်။ အခြားသူများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
အလုပ်များ။ သင်လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း update ကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့်ပြီးမြောက်စေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "Kindle Paperwhite (၆ မျိုးဆက်) မှဗားရှင်း ၅.၆.၅ ကိုယူဆောင်လာသည်"
Goodreads ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူခဲ့သော Kindle paperwhite (2012) တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းရှိ / မရှိသိရှိပါသလား။ ငါသည်သင်တို့ပြောသကဲ့သို့ငါ့ Kindle ၏ software ကို update လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Ane Ayo အားပြန်ပြောပါ
gerardo durand ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
အမေဇုံကငါ့ကိုအလိုအလြောကျထကျအလိုအလြောကျပွောငျးလဲသညျ့အကွောငျးကိုအီးမေးလ်တစောင်ပေးပို့ခဲ့သညျ။ အဘယျသို့ဖွစျခဲ့သညျကိုငါမသိ၊ ငါ pc နှင့်နှစ်ရက်ဆက်သွယ်ပြီးပြီ။ သင်၏ kindle စတင်ချိန်တွင်ခဏစောင့်ပါ။ နှစ်ရက်ထက် ပို၍ ကြာလိမ့်မည်။ ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်, လွန်ပြီ
gerardo durand အားပြန်ကြားပါ
ဗားရှင်း ၂.၅.၃ ရှိသည့်သတ္တုတွင်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် b2.5.8 မှစသော serial နှင့်အတူ 009le Klele တစ်ခုရှိသည်။ update .bin ဖိုင်ကိုကူးယူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်သည်၊ သို့သော်“ your kindle update” ၏ရွေးစရာကိုဘယ်တော့မျှဖွင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့ငါက usb အားဖြင့်ငါပြန်လည်ချိတ်ဆက်သောအခါငါ kindle .bin ဖိုင်ဖျက်ပစ်ကြည့်ပါ
Tagus တက်ဘလက်ဟာယူရို ၈၀ အောက်ပဲ
Woxter Scriba 190 Pearl, စျေးကွက်တွင်အမြန်ဆုံး eReader